Email Kushambadzira neMailrelay. Zvese nezve vhezheni itsva yeichi chishandiso | ECommerce nhau
Email Kushambadzira neMailrelay. Zvese nezve vhezheni itsva yeichi chishandiso
Claudi casals | | Email marketing
Email kushambadzira ndeimwe yemaitiro akanyanya kushandiswa kana uchiedza kuwedzera kutengesa. Uye zvakare, kuti uwane vanyoreri, chengetedza vatengi, simbisa kuoneka uye uwane kukunda kukuru. Anenge kubva pakutanga kuti makambani akatanga kusangana nevatengi online, email kushambadzira ndiyo yaifarirwa yekusarudzira sarudzo kune vazhinji vavo.
mailrelay isoftware inopa masevhisi ayo anotarisana nekutengesa neemail nechishandiso chakanyanyisa. Ruzivo rwavo mumunda, pamwe chete nenhamba huru yevatengi, uye chiono chavo chekugara kumberi, zvakavaita gomba rakakura munyika ino. Tichaona ongororo yekuti Mailrelay chii, ndeapi masevhisi aanotipa, ndeapi mabhenefiti atinogona kuwana mairi, uye nei iri sarudzo yakanaka yekuzviongorora kuti uzvisimudzire neemail.
1 Chii chinonzi Mailrelay?
2 Ndedzipi shanduko dzatinogona kuwana mune yako nyowani chishandiso?
3 Zvakanakira Mailrelay
Chii chinonzi Mailrelay?
Mailrelay peji repamba
Ndicho software yakagadzirwa muna 2001 nekambani yekutambira ConsultorPC. Pakutanga, yaive yekuwedzera sevhisi yavakapa kune vatengi vavo. Makore gumi gare gare, muna 10, yakatanga kushanda yakazvimiririra, sezvazvinozivikanwa nhasi semupi webasa reemail.
Pakati pezvinhu zvacho pane tsamba dzetsamba uye tsamba, mafirita, manhamba, uye masevhisi ekushandisa manejimendi uye maturusi ekuongorora mushandirapamwe.
Parizvino chishandiso cheMailrelay chagadziriswa, asi havana kurega kufanana. Semuenzaniso, mumatafura emitengo yavo, pane zvirongwa zvichienderana nevhoriyamu revanyori uye maemail anotumirwa. Chinhu chakakosha apa kuratidza kuti kana munhu kana kambani iri kutanga bhizinesi ravo pamhepo, vane zvirongwa zvemahara. Zvirongwa zvese zvine pekugara padiki kwemwedzi gumi nemaviri, kusanganisira iwo emahara, ayo akasununguka kwazvo. Asingasviki pasi pe12 e-mail uye anosvika kune zviuru gumi neshanu vanyoreri, uye chekupedzisira asi chisiri chidiki, hapana nguva inorambidzwa. Uye sezvatakataura, chirongwa ichi hachibhadharwe, chete nemamiriro ekuvatevera mumasocial network.
MuMailrelay vane vatengi vanopfuura mazana maviri ezviuru. Pakati pevamwe vacho, isu tine mazita anozivikanwa seTATA Motors, SEAT, Asus, Mediaset España, Cadena SER uye zvimwe zvakawanda zvakaita seIberocruceros iyo yatinogona kuwana mu Mailrelay kubudirira nyaya pawebhusaiti yavo.
Ndedzipi shanduko dzatinogona kuwana mune yako nyowani chishandiso?
Mailrelay yakagadziridzwa zvachose kubvira 0. Kutora mukana wechiitiko cheanopfuura makore gumi neshanu muchikamu, izvi ndizvo zvimwe zvekuvandudzwa kutsva kwakabatanidzwa:
Dhibhodhi rako hombe rakagadziridzwa, kusanganisira yemenyu yepamusoro uye pfupiso yemushandirapamwe wekupedzisira wakaitwa. Iyo ine otomatiki yakawanda uye zvirinani, mafomu matsva ekunyorera, uye mukana wekuwedzera uye kushanduka kwesimba revateereri.
Nyowani ine simba nyowani yekudhonza uye yekudonhedza. Izvi zvinofambisa kugadzirwa kwematsamba, ane mabhuroko enzvimbo dzekudyidzana, mavhidhiyo, mifananidzo, zvinyorwa, makoramu nevamwe.
Iwo maverengero eiyo nyowani vhezheni anotendera rumwe ruzivo uye munguva chaiyo. Pakati pe data rakapihwa kune vanyoreri vanovhura email, ayo anodzvanya, neruzivo maererano nenzvimbo yavo, mazuva uye nguva pazvinoitika. Zvakare iyo data iri ayo akanakisa ma link, nezvimwe. Nenzira iyi, zviri nyore kudzidza uye kuongorora mameseji email nekuvandudza macampaign eemail. Muchiitiko ichi, izvi zvese zvinosanganisirwa muakaundi account, saka kana munhu achida kuyedza sevhisi, vanogona kuzviita nerusununguko rwakakwana.
Mikana yekuwedzera chikamu. Izvo zvinogona kuitwa mune yechinyakare maitiro kana neyatsva masimba maficha kutarisisa uye kuisa pamberi vanokwanisa vashandisi.
Iwo otomatiki akagadziridzwa uye yakawedzerwa zvichibva pakunyoresa, kudzvanya kana kuvhura tsamba.
Pamusoro pezvakanaka zvataurwa pamusoro apa, kune akawanda mamwe makakatanwa ekushanda neemail kushambadzira neMailrelay. Tevere, isu takasarudza ina inofanirwa kusimbiswa.
Subscriber manejimendi. Vanogona kusiyanisa pakati pekushanda uye kusashanda. Ivo vanoshanda vanogona kugamuchira tsamba dzetsamba pasina matambudziko, asi vasina basa vanogona kunge vakanyoresa, asi vasina kusimbisa kunyoreswa. Izvi zvinodaro nekuti maererano nemitemo yekuchengetedza data, ivo vanogadza iyo miviri yekupinda-in system mune yavo mutemo. Uye zvakare, iwe unokwanisa kuwana vasina kunyoreswa, vadzimwa vashandisi, bounced vashandisi uye nemunhu wese mune zvese.
Zvichifanotaurwa matemplate. Kugadzira matemplate neMailrelay zviri nyore kwazvo, sezvo paine akawanda acho akafanotaurwa. Izvi zvinonyanya kubatsira kana, semuenzaniso, iwe usina zano reHTML.
A / B bvunzo uye yemahara autoresponders. Izvo zvakakwana kuti utarise kuti ndeipi email ine yakanyanya kuburitsa pakati pevanyori vako. Chishandiso chakakosha uremu hwacho mugoridhe, uye icho chinokutendera kuti uone kuti ndeipi tsamba ine mukana wakanyanya kutumirwa. Kutanga kusarudza chikamu chidiki chevanyoreri, uye mushure mekuongorora, tumira chakakodzera kune vamwe vese.
Yakazara customizable mafomu ekunyorera. Nenzira yakapusa, uye iwe unogona kugadzirisa zvese. Kubva pane peji rekunyorera, senge kuzvinyora kana kugashira peji.
Sezvose, isu tichangoziva chete izvo zvatinogona kuhwina kana isu tichiedza chimwe chinhu. Uye nezvenyaya iyi, mukutengesa email ne Mailrelay, tichava nechishandiso chinotipa mahara emahara nemasevhisi akazara. Y Kana iwe usingaite email kushambadzira, ndinokukurudzira kuti uedze. Iye zvino unoziva kwekutanga!
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Email marketing » Email Kushambadzira neMailrelay. Zvese nezve vhezheni itsva yeichi chishandiso
Mazano ekuti uwane zvakanakisa kubva Vhidhiyo Email Kushambadzira
Zvikanganiso zvinokuvadza yako brand brand pasocial network